Dare reHigh Court Rinomisa Mapurisa Kusecha Zviri paNharembozha dzeEconet
Dare repamusoro rakatambira nemusi weChina chikumbiro chekambani yeEconet Wireless chekuti rimise mapurisa kushandisa gwaro raakapihwa nedare ramajesitireti rinoapa mvumo yekutsvaga zvaari kuda panharembozha dzevanhu vanoshandisa kambani iyi, kana kuti search and seizure warrant, vane ruzivo nezviri kuitika vaudza Studio7.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kumagweta eEconet, kanawo kumutauriri wemapurisa, VaPaul Nyathi, sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo.
Asi pepanhau repaindaneti reZimLive.com nesangano renhau rinozivikanwa pasi rose, reReuters, aburitsawo nyaya iyi achiti dare repamusoro ratambira chikumbiro chekambani yeEconet.
Mapurisa akanga apihwa simba rekuita izvi mushure mekunge audza dare repasi iri kuti anoda kuongorora kufambiswa kwaitwa mari nekambani iyi achiti pane huori huri kuitwa.
Asi Econet Wireless, yakamirirwa nekambani yemagweta yeMtetwa and Nyambirai, yakakwidza nyaya iyi ichipikisa search and seizure warrant ichi kuita izvi kunotyora bumbiro remitemo yenyika, uye kodzero dzevanhuwo zvavo vanoshandisa nharembozha dzeEconet.
Mutongi wedare iri, Amai Edith Mushore, vakatambira chikumbiro cheEconet chekuti mapurisa asaenderera mberi nekusecha nharembozha dzekambani iyi.
Nyaya iyi ichanzwikwa zvizere apo magweta eEconet nemagweta emapurisa achapikisana pamberi pedare repamusoro. Mushure mezvo, dare richapa mutongo waro mushure mekunzwa zvinenge zvaiswa mudare iri nemativi maviri aya.
Mumagwaro ayo ari mudare, hurumende inoti vanhu vanoita zvekutengesa mari pamukoto vari kushandisa nharembozha dzeEconet mukubhadharana mari idzi izvo inoti zviri kuvhiringa kufambiswa kwemari munyika.
Hurumende inotiwo kuita kwakadai kunoita kuti vanhu vafambise mari nenzira dzisiri pamutemo, nokudaro kambani yeEconet inofanirwa kuongororwa nharembozha dzayo.
Asi mugwaro rayo rekupikisa kusechwa kwenharembozha dzevanhu, Econet yakati danho riri kuda kutorwa nemapurisa harina musoro uye rinozvidza kodzero dzevanhu dzinochengetedzwa nebumbiro remitemo yenyika.
Mutongo waAmai Mushore usati wadzikwa, masangano maviri anorwira kodzero dzevanhu munyika akatsigira Econet Wireless kuburikidza nekuendesa magwaro awo achikumbira matare aya kuti amise mapurisa kupenengura zviri munharembozha dzevanhu vanoshandisa kambani yeEconet.
Mukuru werimwe remasangano aya, reMedia Institute of Southern Africa-Zimbabwe, VaTabani Moyo, vakati nekuda kwekuti hurumende inozivikanwa nekumbunyikidza kodzero dzevanhu kana ikange yaziva nezvehupenyu hwavo, vakatora danho rekupikisa search and seizure warrant yakapihwa mapurisa nepamusana pekuti igaro ziva kuti mapurisa anotyora kodzero dzevanhu izvo zvinozoisa hupenyu hwevanhu vakawanda panguva yakaomarara.
Misa-Zimbabwe yakaita izvi yakabatana nesangano guru rinorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights Association (ZimRights).
Mukuru weZimRights, VaDzikamai Bere, vakaudza Studio7 kuti zviri kuda kuitwa nemapurisa izvi zvinotyora kodzero dzenhengo dzavo kunyanya kodzero yekurarama hupenyu hwakavandika.
Vakatiwo vanotyira kuti mapurisa anogona kushandisa ruzivo urwu kushungurudza nhengo dzavo.
Gweta riri kumiririra masangano maviri aya, VaChris Mhike, vakati donzvo ravo rekuenda kumatare nderekuti masimba akapihwa mapurisa nedare ramajesitireti asendekwe parutivi.
VaMhike vakatiwo zviri kuda kuitwa izvi zvinotyora bumbiro remitemo yenyika.
Matanho akatorwa nemasangano aya anotevera matanho akatorwa nekambani yeEconoet nemusi weMuvhuro, iyo yakapikisa mudare repamusoro search and seizure warrant yakapihwa mapurisa.
Econet ndiyo kambani yenharembozha inonyanyoshandiswa muZimbabwe, uye kambani iyi inoti inoshandiswa nevanhu vanodarika mamiriyoni gumi nerimwe nezviuru mazana mana.
Kambani iyi ndiyo imwe yemakambani akazvimirira ari kubatsira hurumende yaVaEmmerson Mnagngagwa munyaya dzehutano, uye ine hurongwa hwekubatsira vana vanoshaya kuti vakwanise kuita zvidzidzo zvepamusoro soro, kuburikidza nechirongwa cheHigher Life Foundation, icho chakatangwa namuzvina bhizinesi, VaStrive Taputaira Masiyiwa nemudzimai wavo, Amai Tsitsi Masiyiwa muna 1996.
Kambani yeEconet Wireless ndiyo inotsigira Higher Life Foundation nemari.